Fikirka Xorta ah – Wararka ku saabsan in dhalinyaro Somali ah oo ku nool dalka Maraykanku ay ka tagaan gobolka ay u badan yihiin ee Minnesota oo ay dagaalka...
by	Morgan Jr.	December 7, 2008
Fikirka Xorta ah – Wararka ku saabsan in dhalinyaro Somali ah oo ku nool dalka Maraykanku ay ka tagaan gobolka ay u badan yihiin ee Minnesota oo ay dagaalka ka holcaya dalkooda ka qayb qaataan oo qaarkood is qarxiyaan ayaa soo badanaya.
Waxaba ay ciidanka dembi baadhista ee federaalka ee FBI loo yaqaan caddeeyeen in ku jiraan baadhista arrintaas.
Waxay soo celiyeen maydkii intii ka soo hadhay nin is qarxiyay oo lagu sheegay Shirwac Axmed. Waxa la leyahay wuxuu ka mid ahaa kooxdii bishii Oktober 29-keeda ee sannadkan saddexda meelood ka qarxiyay Somaliland. Waxana halkaas ku dhintay ama ku dhaawacmay dad aad u badan.
Haddaba waxa toddobaadkan la aasay ninkaas dhallinta yar oo ka mid ah tiro dhallinyaro la layahay oo waalidkood iyo qaraabadoodu ay maalintii Sabtida ee bishan December 6 ku kulmeen xarun Bryant Cole la yidhaa oo jaaliyaddu ku shirto. Magacyada meesha laga qakhriyay ayaa waxa ka mid ahaa saddex dhalinyaro ah oo laba jaamacadda hadda galeen mid kalena uu dugsiga sare ku jiray. Iyadoo si dadban loo eedeeyey koox aan la magacaabin oo madaxa ka xadday dhallintaas.
Waxa halkaa ka hadlay dad badan oo cadhaysan oo runtii u badan garab ka mid ah ggarabyada siyaasadda Somalida isku haya. Waxana ay si cadho ku jirto u sheegeen in ay dawladda Maraykanka iyo hayadaha nabadgelyada ka codsadeen in carruurtoodii loo soo celiyo.
Tirada dadka maqan ayaa lagu muransan yahay. Waxa dadka qaar ay qabaan in dhallinyaro ku dhaw 40 ay dhoofeen qaarkoodna soo noqon doonaan dhowaan. Waxase hadda runta u dhaw lambar intaas ka yar oo aan toban gaadhayn.
Waxa la soo xiganayaa warar sheegaya in dhallinta maqani ay badankoodu ka wada tirsan yihiin masaajidka Abuubkar Al Sidiiq oo ay ku socoto baadhis. Waxana la sheegay in Iimaamkii Masjidka iyo dad la socday loo diiday inay xajka u dhoofaan oo lagu daray liiska dadka aan duuli karin.
Haddaba arrintan oo murgisay nolosha dadka Somalida ah ee ku dhaqan gobolkaas Minnesota iyo guud ahaan dalka ayaa waxay sii kicisay xiisadda tartanka loollanka siyaasadda ee qabiilka ku salaysan ee Somaliya oo si toos ah u taabatay nolosha dadkan ka fog safka hore ee dagaalka sokeeye.
Is aamin la’aanta sii fogaanaysa ayaa waxay Somalida ku abuurtay colaad raagta oo aan tanaasulaad lahayn. Taasoo taabatay dad deggan meelo aad uga fog goobaha dagaalada.
Xaalka Somalida ayaa aad looga hadlaa beryahan oo jaraa’idka iyo television nada caalamiga ahina ay qaadaa dhigaan. Arrinta colaadda Somaliya ka taaqan oo muddo badan socotay kolbana weji yeelanaysa ka sokow, waxa mashaqada Somalida iftiinka ku shiday budhcad badeeda oo si badheedh ah u afduubta maraakiib waaweyn. Waxayna indhaha adduunka u soo jeediyeen markay qabaseen markab weyn oo saliid u siday dalka Maraykanka iyo mid sida hub culus oo taangiyo ku jiraan.
Waxa toddoaadkan oo keliya maqaallo ka qoray New York Times oo ka mid ah wargeysayada ugu magaca, akhriska iyo awoodda badan adduunka. Isagoo xaaladda Somaliya ku tilmaamay mid ka sii daraysa.
Waxa sidoo kale ka hadlay wargeysa toddobaadlaha ah ee loo yaqaan NEWS WEEK MAGAZINE oo isagu soo jeediyay maqaalkiisa ah, “Libaax Badeedka Biyaha” oo qoray, “Sida kama dabaysta ah ee budhcad badeedda biyaha Somaliya looga tiritiri lahaa.”
Siyaasadda Somalida ee murugsan ee aargoosi aano qabiil iyo dhakhso u dhereg iyo maxaad boobtaa ku xididaysan ayaa adduunku maanta aad uga soo taagan yahay. Waxana la sheegay in maamulka cusub ee Madaxyenaha la doortay ee Barak Obama ay Somaliya ku jirto liiska wax qabad ee siyaasaddiisa srrimha dibadda ee ku wajahan Afrika.
Waxana taas ka markhaati ah ballan qaadka uu sheegay in maamulkiisu la shaqayn doono Qaramada Midoobay si loo xalliyo arrimo badan oo gurrucan oo ay Somaliya ku jirto. Taasoo Safiikiisa cusub ee dalka USA u fadhiyi doona UN-ta Marwo Susan Rice ay tahay mid aaminsan in xalka Somaliya ku jiro wax qabad buuxa oo u dhexeeya xubnaha Qaramada Midoobay.
Haddaba xiisadaha kala duwan ee Geeska Afrika ee ay shidayaan danaha is jiidhaya ayaa waxa la arki doonaa in isbeddel weyni ka soo baxo marka u shirka siyaasiyiinta Somaliya ee dalka Djibouti ku gorgortamaya dhammaado. Iyo goorta uu maamulka cusub ee Obama qaado tallaabooyin wax ku ool ah oo ku saabsan siyaasadda Geeska. Waxa kaloo arrinta wax ka beddlei kara dalalka Midawga Yurub oo arrinta budhcad badeedda waxqabadkeeda u xusul duuban.
Halkan ka daawo aaskii Shirac Axmed ee Minnesota, USA
Maxay kula tahay? Fikirkaaga si cilmiyaysan u cabbir.
by	Morgan Jr.	- Dec 5, 2008
by	Morgan Jr.	- Dec 9, 2008